MAXAA LAGAGA WADA HADLAY SHIRKII WASIIRADA EE MAANTA? | Toggaherer's Weblog
Shirkii Golaha Wasiirada ee Maanta oo Salaasa ah lagu qabtay xarunta Madaxtooyada, ayaa si qoto dheer u falan qeeyay abaaraha saameeyay gobollo ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland.
Shirkaasi Golaha Wasiirada oo uu gudoominayay Madaxweyne ku xigeenka JSL Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin, waxa lagu soo bandhigay, lagana wada hadlay arrimo badan oo la xidhiidha abaaraha, biyo la’aanta , baad la’aanta iyo cunto yarida ka jirta gobollo ka mid ah Jamhuuriyadda Somaliland.
Shirkaasi Golaha Wasiirada, waxa kale oo lagu soo bandhigay gurmadka biyo dhaamiska ee hay’adaha aan dawliga ahayni sida UNICEF, NERAD ay ka wadaan gobollo qaar ka mid ah iyo baahida loo qabo in la dar dar geliyo gurmadkaasi abaaraha.
Sida laga war qabo gobollo badan oo ka tirsan Somaliland oo ay u badan yihiin kuwa bariga, ayaanay ka da’in roobabkii gu’ga, taas oo keentay biyo la’aan, baad la’aan iyo xoolihii noolaa oo in badani ay halkaasi ku dhimatay.
Shirka Golaha Wasiirada waxa kale oo lagaga wada hadlay in iyana laga sii digtoonaado dhibaatooyinka uu keeni karo Ayaxa laga soo sheegay meelo ka mid ah Somaliland.
Gabo gabadiina waxa uu shirku isku raacay in iyana loo baahan yahay in dhamaan gobollada Somaliland laga sameeyo Salaado iyo Ducooyin roob doon ah oo ilaahay lagu waydiisanayo in ummadeena ka saaro abaaraha.